/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/အဆုတ်ကင်ဆာကုသရန်ဆေးဝါး ၇ မျိုးကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်
အပေါ် Posted 07 / 01 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ကင်ဆာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမည်သည့်နေရာ၌မဆိုစတင်နိုင်သည်။ အဆုတ်တွင်စတင်သောကင်ဆာကိုအဆုတ်ကင်ဆာဟုခေါ်သည်။ အဆုတ်ထဲကဆဲလ်တွေမထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲကြီးထွားလာပြီးပုံမှန်ဆဲလ်တွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစတယ်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
ကင်ဆာဆဲ (လ်) များသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ အဆုတ်ရှိကင်ဆာဆဲ (လ်) များသည်တစ်ခါတစ်ရံ ဦး နှောက်သို့သွားပြီးထိုတွင်ကြီးထွားနိုင်သည်။ ကင်ဆာဆဲ (လ်) တွေပြုလုပ်တဲ့အခါအဲဒါကို metastasis လို့ခေါ်တယ်။ ဆရာဝန်များအနေဖြင့်နေရာအသစ်ရှိကင်ဆာဆဲလ်များသည်အဆုတ်မှဆဲလ်များနှင့်တူသည်။
ကင်ဆာရောဂါသည်အစပြုသည့်နေရာအတွက်အမြဲတမ်းအမည်ပေးသည်။ ဒါ့ကြောင့်အဆုတ်ကင်ဆာဟာ ဦး နှောက် (သို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာရာ) သို့ပြန့်နှံ့သွားရင်အဲဒါကိုအဆုတ်ကင်ဆာလို့ခေါ်တယ်။ ဦး နှောက်ထဲရှိဆဲလ်များမှစတင်သည် မှလွဲ၍ ၎င်းကို ဦး နှောက်ကင်ဆာဟုမခေါ်ပါ။
မှတ်ချက် - အဆုတ်ဟာရင်ပတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ရေမြှုပ်ကောင် ၂ လုံးပါ။ ညာဘက်အဆုတ်တွင်အစေးဟုခေါ်သည့်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိသည်။ လက်ဝဲအဆုတ်2အမြှေးရှိပါတယ်။ အဆုတ်သည်လေထဲကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှထုတ်ပေးသည်။ သူတို့ကအောက်စီဂျင်ကိုယူပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။
လေပြွန် (trachea) သည်လေကိုအဆုတ်ထဲသို့ကျစေသည်။ ၎င်းသည် bronchi ဟုခေါ်သောပြွန် (၂) ခုခွဲသည်။
အဆုတ်မှစတင်သောကင်ဆာကိုအဓိကအဆုတ်ကင်ဆာဟုခေါ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာရှိအခြားနေရာမှအဆုတ်သို့ပြန့်ပွားသောကင်ဆာသည်ဒုတိယအဆုတ်ကင်ဆာဟုလူသိများသည်။ ဒီစာမျက်နှာကမူလအဆုတ်ကင်ဆာအကြောင်းပါ။
အဓိကအဆုတ်ကင်ဆာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုကင်ဆာကြီးထွားလာသည့်ဆဲလ်အမျိုးအစားများဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ သူတို့က:
သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) - ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၈၇% ကျော်ရှိသည့်အသုံးအများဆုံးပုံစံ။ ၎င်းသည်အမျိုးအစားသုံးမျိုးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - squamous cell carcinoma, adenocarcinoma သို့မဟုတ် cell-carcinoma ။
ဆဲလ်အသေးကင်ဆာ (SCLC) - များသောအားဖြင့်ဆဲလ်သေးသေးမဟုတ်သောအဆုတ်ကင်ဆာထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာရှိသူများသည်နောက်ပိုင်းအဆင့်အထိလက္ခဏာမပြနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်လာပါက၎င်းတို့သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။
▪အသံပြာခြင်းကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏အသံသို့ပြောင်းလဲသွားသည်
▪ bronchitis သို့မဟုတ် pneumonia စသည့်ရင်ဘတ်မကြာခဏကူးစက်ခြင်း
▪ရင်ဘတ်အလယ်ရှိ lymph node များရောင်ရမ်းခြင်း
အချိန်တန်သော်လူတစ် ဦး သည် - ပို၍ ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ - ဥပမာ -
ဆရာဝန်ကမင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းမေးခွန်းတွေမေးတယ်။ အကယ်၍ ဆိုင်းဘုတ်များသည်အဆုတ်ကင်ဆာကိုညွှန်ပြနေပါကနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ဖြေ - ဒါကသင့်ရဲ့အဆုတ်ပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များကိုရှာဖွေရန်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမြင်ရလျှင်သင်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများလိုအပ်လိမ့်မည်။
မှန် CT scanဖြေ - ဒါကို CAT scan လို့လည်းခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်သင့်အတွင်းပိုင်း၏အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးသည့်အထူးဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ မှန်ပြောင်းမှန်ပြောင်းမှန်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။
PET scan ကဖြေ - ဒီစမ်းသပ်မှုမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထူးကင်မရာနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့သကြားအမျိုးအစားကိုပေးတယ်။ အကယ်၍ ကင်ဆာရောဂါရှိပါကသကြားဓာတ်သည်ကင်ဆာရောဂါကိုတွေ့နိုင်သည့်“ အစက်အပြောက်များ” အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကကင်ဆာပျံ့နှံ့သွားသည်ဟုထင်သောအခါ၎င်းသည်အကူအညီပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမသိပါ။
Bronchoscopyပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ပြွန်ကိုသင့်ပါးစပ်ထဲက bronchi ထဲကိုရောက်စေတယ်။ အကျိတ်ကိုရှာရန်ဆရာဝန်ကပြွန်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ အဆိုပါပြွန်ကိုလည်းခန္လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသွေးအားစမ်းသပ်မှုများအဆုတ်ကင်ဆာကိုရှာဖွေရန်သွေးစစ်ဆေးမှုကိုအသုံးမပြုပါ၊ သို့သော်သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဆရာ ၀ န်အားပိုမိုပြောပြရန်ပြုလုပ်ထားသည်။
သင့်မှာသေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာရှိရင်ဆရာဝန်ကသူဘယ်လောက်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာသိချင်လိမ့်မယ်။ ဒါကိုဇာတ်စင်လို့ခေါ်တယ် အခြားလူများကသူတို့၏ကင်ဆာသည်“ အဆင့် ၂” သို့မဟုတ်“ အဆင့် ၃” ဖြစ်သည်ဟုသင်ကြားဖူးပေမည်။ သင့်အတွက်မည်သည့်ကုသမှုအမျိုးအစားသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ကင်ဆာအဆင့်ကိုရှာဖွေရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်၏အဆင့်သည်အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ဖြစ်နိုင်သည်။ အရေအတွက်နည်းလေကင်ဆာပျံ့နှံ့လေလေဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အဆင့် ၄ ကဲ့သို့သောများသောအားဖြင့်အဆုတ်အပြင်ဘက်သို့ပျံ့နှံ့သွားသောပိုမိုလေးနက်သောကင်ဆာကိုဆိုလိုသည်။ သင့်ကင်ဆာရောဂါအဆင့်နှင့်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုဆရာ ၀ န်အားမေးမြန်းရန်သေချာစေပါ။
♦ မှော်အတတ်, ဒါမှမဟုတ်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏- ကင်ဆာသည်ပုံရိပ်ဖတ်ခြင်းတွင်မပေါ်ပေါက်ပါ။ သို့သော်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များသည်အစိုင်အခဲသို့မဟုတ်ချွဲတွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။
♦ ဇာတ်စင် 0ဖြေ - ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆဲလ်တွေရှိတယ်။ ထိပ်မှာရှိတဲ့ဆဲလ်တွေထဲမှာလေတွေစီတန်းနေတယ်။
♦ ဇာတ်စင် 1အဆုတ်ထဲ၌အကျိတ်တစ်ခုရှိနေသော်လည်း ၄ စင်တီမီတာ (စင်တီမီတာ) သို့မဟုတ်အောက်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိချေ။
♦ ဇာတ်စင် 2- အကျိတ်သည် ၇ စင်တီမီတာသို့မဟုတ်အောက်တွင်ရှိပြီးအနီးအနားရှိတစ်သျှူးများနှင့်တုတ်ခေါင်းများသို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
♦ ဇာတ်စင် 3- ကင်ဆာဟာ Lymph node တွေပျံ့နှံ့သွားတယ်။
♦ ဇာတ်စင် 4- ကင်ဆာဟာအရိုးတွေဒါမှမဟုတ် ဦး နှောက်လိုမျိုးဝေးလံတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဆီကိုပျံ့နှံ့သွားတယ်။
(2) အလုပ်သင် Of Sကုန်တိုက် Cသူ Lung Cancer
အကန့်အသတ်ရှိသောအဆင့်တွင်ကင်ဆာသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ lymph node များ၌ရှိနေနိုင်သော်လည်းရင်ဘတ်၏တစ်ဖက်တည်းကိုသာထိခိုက်သည်။ ဒီအမျိုးအစားရှိသူတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်မှာသူတို့ဟာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုရင်သူတို့မှာကင်ဆာရောဂါရှိနေပြီဆိုတာသိကြတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်၎င်းကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးဖြင့်areaရိယာတစ်ခုတည်းအဖြစ်ကုသနိုင်သည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အဆင့်တွင်ကင်ဆာသည်ရင်ဘတ်၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၎င်းသည်အခြားအဆုတ်နှင့်အခြားခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာသေးငယ်သောသုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်အလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုလျှင်၎င်းတို့တွင်၎င်း၌ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
DNA နှင့်ဗီဇပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဗီဇပြောင်းလဲမှုများကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများအပြီးတွင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုများသည်ဆဲလ်များပြန့်ပွားခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ရှိဆဲလ်သေခြင်း (apoptosis) နှင့် DNA ပြုပြင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဆဲလ်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပျက်စီးမှုများလေလေကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်သူအားလုံးသည်အဆုတ်ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲအဆုတ်ကင်ဆာရှိသူတိုင်းဆေးလိပ်မသောက်ကြပါ။ သို့သော်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အဆိုးရွားဆုံးသောအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆုတ်ကင်ဆာ ၁၀ လုံးမှ ၉ ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ စီးကရက်အပြင်ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်လည်းဆက်နွှယ်သည်။ သင်ဆေးလိပ်သောက်လေလေကြာလေလေ၊ ဆေးလိပ်သောက်လေလေအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်လေဖြစ်သည်။
သင့်ကိုထိခိုက်စေမည့်ဆေးလိပ်သောက်သူမလိုပါ။ သူတစ်ပါး၏မီးခိုးငွေ့ကိုရှူရှိုက်မိခြင်းသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အရင်းအမြစ်အရအမေရိကန်တွင်နှစ်စဉ်အဆုတ်ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူ ၇,၃၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊
ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များတွင်ဓာတုပစ္စည်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီးအနည်းဆုံး ၇၀ သည်ကင်ဆာဖြစ်စေသည်။
အဆုတ်တစ်သျှူးများအနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သော်လည်းအဆုတ်တစ်သျှူးအပေါ်ဆက်လက်သက်ရောက်မှုသည်စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ပျက်စီးသွားသောဆဲလ်များသည် mutate ကြီးထွားလာပြီးမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါ။ သင်ရှူမိသောဓာတုပစ္စည်းများသည်သင်၏သွေးကြောထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးသယ်ဆောင်သွားသဖြင့်အခြားကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိနေသေးသော်လည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကထိုအန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး ၁၀ နှစ်အတွင်းအဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်သေဆုံးနိုင်ခြေသည်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်။
ရေဒွန်သည်အရောင်မဲ့သော၊ အနံ့မရှိသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးရေဒီယိုသတ္တိကြွသောရေဒီယမ်ကိုပြိုကွဲစေသောကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်လွှာတွင်တွေ့ရှိရသည့်ယူရေနီယမ်ပြိုကွဲခြင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ယိုယွင်းခြင်းကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ionize ဖြစ်စေသည်။ ရေဒွန်သည်အမေရိကန်တွင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု၏ဒုတိယအများဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်သေဆုံးသူ ၂၁,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ရေဒွန်အာရုံစူးစိုက်မှု ၁၀၀ ဘီကီလိုဂရမ် / m³တိုးတိုင်းအတွက် ၈-၁၆% တိုးလာသည်။ ရေဒွန်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည်နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မြေဆီလွှာနှင့်ကျောက်တုံးများအကြောင်း။ ယူအက်စ်ရှိအိမ် ၁၅ လုံးလျှင် ၁ ခုခန့်တွင်တစ်လီတာ picocury (pCi / l) (၁၄၈ Bq / m³) ၏လမ်းညွှန်ချက်များအထက်ရေဒွန်ပမာဏရှိသည်။
Asbestos သည်အဆုတ်ကင်ဆာကဲ့သို့သောအဆုတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် Asbestos နှစ်မျိုးလုံးသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Asbestos နှင့်အလုပ်လုပ်သောဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်လူ ဦး ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၄၅ ဆတိုးလာသည်။ Asbestos သည် pleura ၏ကင်ဆာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တကယ်တော့အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ကွဲပြားတယ်။
လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ အထူးသဖြင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှလောင်ကျွမ်းသောဓာတုပစ္စည်းများသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။ အမှုန်အမွှားများ (PM2.5) နှင့် sulfate aerosols များသည်အသွားအလာထွက်သောအငွေ့များမှထွက်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်အနည်းငယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အနေဖြင့်တစ်ဘီလီယံလျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးခြင်းသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို ၁၄% တိုးစေနိုင်သည်။
မီးဖို၊ မီးသွေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံအကြွင်းအကျန်နှင့်မီးဖိုချောင်မှုတို့အတွက်လေထုညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ပေးသောအထောက်အထားများကအထောက်အကူပြုသည်။ လောင်ကျွမ်းသောဇီဝလောင်စာ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းများသည်ကင်ဆာရောဂါကိုလူသိများသည်သို့မဟုတ်သံသယရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူပေါင်း ၂.၄ ဘီလီယံခန့်ကိုထိခိုက်စေပြီးအဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၁.၅% ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆုတ်ကင်ဆာ၏ ၈% ကိုအမွေဆက်ခံသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသောဆွေမျိုးများကမျိုးရိုးဗီဇပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ဆတိုးလာသည်။ ခရိုမိုဆုန်း ၅၊ ၆ နှင့် ၁၅ ရှိပေါ်လီမာအနေဖြင့်ရောဂါကိုထိခိုက်နိုင်သည် အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ။ CHRNA8, CHRNA5 နှင့် CHRNB6 သည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်မျိုးရိုးဗီဇ၏ကြင်ဖော်မဲ့ - ဘေ့စ်ပိုလီမာဖီစမစ် (SNPs) သည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေနှင့် RGS15 ဖြစ်သည်။ G-ပရိုတိန်းအချက်ပြကိုထိန်းညှိ။
▲ အခြား အကြောင်းရင်း
များစွာသောအခြားအရာ ၀ တ္ထုများ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိတွေ့မှုများသည်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကင်ဆာအပေါ်သုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (IARC) ကအဆုတ်တွင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်“ လုံလောက်သောအထောက်အထား” အချို့ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်
အချို့သောသတ္တုများ (အလူမီနီယမ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကဒ်ဒီယမ်နှင့်ကဒ်မီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ခရိုမီယမ် (၆) ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဘီရီလီယမ်နှင့်ဘာရီလီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ သံနှင့်သံမဏိတည်ထောင်ခြင်း၊ နီကယ်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ အာဆင်းနစ်နှင့်အော်ဂဲနစ်အာဆင်းနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်မြေအောက်ဟေတီတီသတ္တုတူးဖော်ရေး)
အချို့သောလောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်များ (မပြည့်စုံသောလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေး (အိမ်တွင်းကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်းခြင်းမှအိမ်တွင်းထုတ်လွှတ်မှု)၊ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့သွပ်ဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးအစေး၊ coke ထုတ်လုပ်မှု၊ ကျပ်ခိုးနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လွှတ်မှု)
အိုင်းယွန်းဓါတ်ရောင်ခြည် (X-ray နှင့် gamma) ။
အချို့အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ (မက်သိုင်းအီ (နည်းပညာအဆင့်) နှင့်ဘီ - (chloromethyl) အီ၊ ဆာလ်ဖာမုန်ညင်း၊ MOPP (vincristine - prednisone - နိုက်ထရိုဂျင်မုန်ညင်း - မက္ကရကို - procarbazine အရောအနှော) နှင့်ပန်းချီမှအငွေ့များ)
ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပုံဆောင်ခဲ silica ဖုန်မှုန့်။
အဆုတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ကင်ဆာကိုသာကုသရန်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိခိုက်ပါ။ Chemo ဆေးများ၊ ပစ်မှတ်ထားသောကုထုံးနှင့် immunotherapy များသည်တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖြတ်သွားသည်။ ၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကင်ဆာဆဲ (လ်) များသို့ရောက်နိုင်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာကုသမှုတွင်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဓာတုကုထုံး၊ ပစ်မှတ်ထားသောကုထုံးနှင့် immunotherapy တို့ပါဝင်သည်။ သင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကုသမှုအစီအစဉ်သည်မူတည်လိမ့်မည်။
▪ကုသမှုနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ခံစားချက်။
အဆုတ်ကင်ဆာရှိသည့်လူနာများစွာကိုရွေးချယ်သည် မူးယစ်ကုထုံး ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ အောက်ပါဆေးများကိုအဆုတ်ကင်ဆာ (SCLC နှင့် NSCLC) ကုသရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
AZD-3759 အလားအလာရှိသော antineoplastic လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူအစွမ်းထက် epidermal ကြီးထွားမှုအချက် receptor (EGFR) inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ AZD-3759 သည် EGFR ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးပေးပြီး EGFR ၏အချို့သော Mutant ပုံစံများကို EGFR-mediated အချက်ပြမှုကိုတားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကို induction နှင့် EGFR-overexpressing cell များတွင်အကျိတ်ကြီးထွားမှုကိုတားစီးစေနိုင်သည်။
Gefitinib သည်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ (NSCLC) ကိုကုသရန်ပထမအဆင့်ကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုသော tyrosine kinase inhibitor ဖြစ်သည်။
Gefitinib သည်အင်ဇိုင်းများ၏အက်ဒီနင်ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုလက်ခံသည့် (EGFR) tyrosine kinase ကိုအက်ဒီနင်းအက်ဆစ်၏စည်းနှောင်ထားသောနေရာဖြစ်သောအက်ဒီနိုအက်ဆစ်သုံးဖော့စဖိတ် (ATP) နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ EGFR သည်အဆုတ်နှင့်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်များကဲ့သို့သောအချို့သောကင်ဆာဆဲလ်များ၌အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်မှုသည် apoptotic Ras အချက်ပြမှု transduction ကက်စကိတ်များကိုပိုမိုတက်ကြွစေပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကင်ဆာဆဲလ်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောဆဲလ်များပြန့်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Gefitinib သည် Her1 သို့မဟုတ် ErbB-1 ဟုလည်းရည်ညွှန်းသော EGFR tyrosine kinase ၏ပထမဆုံးရွေးချယ်သော inhibitor ဖြစ်သည်။ EGFR tyrosine kinase ကိုတားဆီးခြင်းအားဖြင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြအဆက်မပြတ်လည်းတားဆီးပေးပြီးကင်ဆာဆဲလ်များပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။
AZD-9291 ကို Osimertinib ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအချို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသော tyrosine kinase inhibitor ဖြစ်သည်။
AZD-9291 ပထမကုသမှုဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်တွင်ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေသည့်အချို့သော Mutant ပုံစံများ (T790M, L858R နှင့် exon 19 deletion) သည် epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI) ဖြစ်သည်။ EGFR-TKIs -line ။ တတိယမျိုးဆက် tyrosine kinase inhibitor အနေဖြင့် AZD-9291 သည်တံခါးစောင့် - T790M mutation အတွက်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပြီး EGFR နှင့် ATP စည်းနှောင်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးနောက်ကျသောရောဂါအတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်မှုနည်းသည်။ ထို့အပြင် AZD-9291 သည်ကုထုံးစဉ်အတွင်းရိုင်းစိုင်းသော EGFR အားမနှမြောစေရန်ပြသခဲ့ပြီး၊
Dacomitinib သည်သေးငယ်သောဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာကို EGFR exon 19 L21R အစားထိုးကုသမှုဖြင့်ကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးဖြစ်သည်။ Dacomitinib သည် (858E) -N-2-16- (piperidin-4-yl) but-1-enamide အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယမျိုးဆက် tyrosine kinase inhibitors ၏နှုတ်ဖြင့်အလွန်ရွေးချယ်သော quinazalone အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ epidermal တိုးတက်မှုနှုန်း receptor မိသားစု kinase domains များ၏ ATP ဒိုမိန်း။ Dacomitinib သည်ဆဲလ်သေးမဟုတ်သောအဆုတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်အတွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် EGFR ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသည်။
Ceritinib ကိုလည်း LDK378 ဟုခေါ်သည်။ crizotinib အားလက်တွေ့မတုန့်ပြန်မှုသို့မဟုတ်သည်းမခံသောလူနာများတွင် anaplastic lymphoma kinase (ALK) -positive metastatic non-small cell အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည့် antineoplastic kinase inhibitor ဖြစ်သည်။
Ceritinib သည် crizotinib ကုထုံး၏ပျက်ကွက်မှု (ခုခံနိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်သည်းမခံနိုင်မှုဒုတိယအဆင့်) ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော anaplastic lymphoma kinase (ALK) -positive metastatic non-small cell အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) နှင့်အရွယ်ရောက်သူများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ NSCLC နှင့်အတူလူနာ ၄% ခန့်တွင် EML4 (echinoderm microtubule-related protein-like 4) နှင့် ALK (anaplastic lymphoma kinase) နှင့် carcinogenesis ကိုအထောက်အကူပြုသော anaplastic lymphoma kinase အကြားပေါင်းစပ်ဗီဇကိုထုတ်ပေးသည့်ခရိုမိုဆုန်းပြန်လည်စီစဉ်မှုရှိသည်။ ကင်ဆာ phenotype ။ Ceritinib သည် ALK ၏ autophosphorylation၊ ALK-mediated phosphorylation အောက်ပိုင်းအချက်ပြပရိုတိန်း STAT4 နှင့် ALK - မှီခိုသောကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်၎င်း၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ crizotinib (ပထမမျိုးဆက် ALK inhibitor) ဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အကျိတ်အများစုသည်အင်ဇိုင်း၏အဓိက“ တံခါးစောင့်” အကြွင်းအကျန်များတွင် mutation ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် crizotinib ခုခံမှုကိုကျော်လွှားရန် ceritinib ကဲ့သို့သောဒုတိယမျိုးဆက် ALK တားစီးမှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ FDA သည် ceritinib ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်approvedပြီလတွင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည် ၅၆% အထိမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ခရီ- ခံနိုင်ရည်ရှိသောအကျိတ်များနှင့်၎င်းကိုမိဘမဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေနှင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
❻ Afatinib (CAS: ၄၃၉၀၈၈-၁၈)
Afatinib သည် Antineoplastic Agent ဖြစ်ပြီးဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသော EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပလက်တီနမ်အခြေပြုဓာတုကုထုံးကိုခုခံခြင်းဖြင့်ကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Afatinib သည် Boehringer Ingelheim အမှတ်တံဆိပ် Gilotrif အဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် dimaleate ဆားပုံစံဖြင့် 4-anilinoquinazoline tyrosine kinase inhibitor ။ ပါးစပ်အသုံးပြုရန်အတွက် afatinib ဆေးများသည် FDA မှအတည်ပြုထားသောစမ်းသပ်မှု ၄ မှတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း metastatic non-small cell lung အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) နှင့်အတူလူနာများအတွက်ပထမအဆင့် (ကန ဦး) ကုသမှုဖြစ်သည်။ Gilotrif ( afatinib) သည် Boehringer Ingelheim မှပထမဆုံး FDA ခွင့်ပြုသည့်ကင်ဆာထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
Erlotinib တစ်ခုဖြစ်သည် EGFR tyrosine kinase inhibitor ဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်သွားကြောင်းပန်ကရိယကင်ဆာကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် tyrosine kinase inhibitors ဟုလူသိများသောဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဒါဟာ epidermal growth factor receptor (EGFR) လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်။ EGFR ကိုကင်ဆာဆဲ (လ်) များစွာနှင့်ပုံမှန်ဆဲလ်များပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် antenna အနေဖြင့်ဖြစ်ပြီးဆဲလ်များထံမှကြီးထွားရန်နှင့်ခွဲရန်ပြောသောအခြားဆဲလ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။ EGFR သည်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့်ကလေးဘဝတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ပျက်စီးနေသောဆဲလ်များကိုပုံမှန်ပြန်လည်အစားထိုးထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ သို့သော်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များစွာတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် EGFR ပမာဏများစွာရှိသည်။ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ EGFR သည်ပရိုတိန်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ပါသည့်ဒီအင်အေ၏ mutation ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရလဒ်မှာ EGFR မှလာသောအချက်အလက်များသည်အလွန်ပြင်းလွန်း။ အလွန်များပြားသောဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့်ကင်ဆာ၏ထူးခြားသည့်ခွဲခြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဆေးအားလုံးကိုပေးနိုင်ပါသည် aasraw သုတေသနအတွက်သာရည်ရွယ်သောစင်ကြယ်သောအမှုန့်ပုံစံဖြစ်သည်။ သငျသညျ aganist အဆုတ်ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်ကိုသိလိုလျှင် aasraw နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
 Underner M, Urban T, Perriot J, de Chazeron I, Meurice JC (ဇွန် ၂၀၁၄) ။ "[ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာ]" ။ Revue des Maladies Respiratoires ။ 2014 (31): 6-488 ။ Doi: 98 / j.rmr.10.1016 ။ PMID 2013.12.002 ။
 Schmid K ကို, Kuwert T က, Drexler H ကို (မတ်လ 2010) ။ “ မိုးလေ ၀ သနေရာများရှိရေဒွန် - ပတ် ၀ န်းကျင်ဆေးပညာတွင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသောအချက်” Deutsches Ärzteblatt International ။ 107 (11): 181-6 ။
 ဒေးဗီးစ် RJ, Lee YC (2010) ။ "18.19.3" ။ အောက်စ်ဖို့ဖတ်စာအုပ်ဆေးပညာ (5th ed ။ ) ။ အောက်စ်ဖို့ဒ်။ ISBN 978-0-19-920485-4 ။
 Cooper WA၊ Lam DC၊ O'Toole SA၊ Minna JD (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃) ။ "အဆုတ်ကင်ဆာ၏မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ" ။ Thoracic ရောဂါ၏ဂျာနယ်။ 2013 ပေးသွင်း5(ပျော့ပျောင်း။ 5): S5-479 ။ Doi: 90 / j.issn.10.3978-2072 ။ PMC 1439.2013.08.03. PMID 3804875 ။
 Kumar က V, Abbas AK, Aster JC (2013) ။ “ အခန်း ၅” ။ Robbins အခြေခံရောဂါဗေဒ (5th ed ။ ) ။ Elsevier Saunders စ။ 9. ISBN 212-978-1-4377-1781 ။
 Subramanian J, Govindan R (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇) ။ “ ဘယ်တော့မှဆေးလိပ်မသောက်သူများတွင်အဆုတ်ကင်ဆာ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ။ လက်တွေ့ကင်ဆာ၏ဂျာနယ်။ 2007 (25): 5-561 ။
 Ferri FF (2014) ။ Ferri ၏လက်တွေ့အကြံပေး 2015 E-Book - ၁။ Elsevier ကျန်းမာရေးသိပ္ပံမှစာအုပ် ၅ အုပ်။ စ။ 5. ISBN 1-708-978-0-323 ။
 Carr က LL, Jett JR (2015) ။ "အခန်း ၁၁၄ - ဆဲလ်မဟုတ်သောအဆုတ်ကင်ဆာကိုကုသခြင်း - ဓာတုကုထုံး။ " Grippi MA ၌ Elias JA၊ Fishman JA၊ Kotloff RM၊ Pack AI၊ အကြီးတန်း RM ။ ငါးဖမ်းသမားရဲ့အဆုတ်ရောဂါများနှင့်ရောဂါများ (114th ed ။ ) ။ McGraw-Hill ။ စ။ 5. ISBN 1752-978-0-07-179672 ။
 Murray N ကို, Turrisi ကို AT (မတ်လ 2006) ။ "သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးကုသမှု၏ပြန်လည်သုံးသပ်" ။ Thoracic ကင်ဆာ၏ဂျာနယ်။ 1 (3): 270-8 ။ Doi: 10.1016 / s1556-0864 (15) 31579-3 ။ PMID 17409868 ။
 Ikushima H ကို (ဖေဖော်ဝါရီလ 2010) ။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး - အနုပညာနှင့်အနာဂတ်အခြေအနေ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ဂျာနယ်။ 57 (1-2): 1-11 ။ Doi: 10.2152 / jmi.57.1 ​​။ PMID 20299738 ။
 Arriagada R, Goldstraw P, Le Chevalier T (2002) ။ ကင်ဆာပညာ၏အောက်စ်ဖို့ဖတ်စာအုပ် (2nd ed ။ ) ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း။ စ။ 2094. ISBN 978-0-19-262926-5 ။
 Goldstein SD, Yang SC (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁) ။ "သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှု၏အခန်းကဏ္”" ။ မြောက်အမေရိက၏ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာဆေးခန်း။ 2011 (20): 4-769 ။
 အဆုတ်ကင်ဆာရှင်သန်မှုစာရင်းအင်းကင်ဆာသုတေသနယူကေ မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊
 မင်းသားပေါလု M (2009ပြီ ၂၀၀၉) ။ “ နာတာရှည်ဆေးရုံကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ။ ပန်းတိုင်တွေကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဖွင့်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခု။ ကင်ဆာ။ 23 (4 Suppl သူနာပြု Ed): 13-7 ။ PMID 19856592 ။
 Stewart က BW၊ Wild CP (၂၀၁၄) ။ ကမ္ဘာ့ကင်ဆာအစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ ။ လိုင်ယွန် - IARC စာနယ်ဇင်း။ စစ။ 2014-2014 ။ ISBN 350-352-978-92-832
 အမျိုးသားကင်ဆာဌာန၊ မြင်နေရသည့်အချက်အလက်များ - Lung နှင့် Bronchus ။ ရောဂါကူးစက်ရောဂါနှင့်အဆုံးရလဒ်များ။ ၂၀၁၀  ၂၀၁၄ ဇူလိုင် ၆ ရက်ကို Wayback Machine တွင်မော်ကွန်းတင်ခဲ့သည်။
 Heavey S, O'Byrne KJ, Gately K (Aprilပြီ ၂၀၁၄) ။ "NSCLC အတွက် PI2014K / AKT / mTOR လမ်းကြောင်းကို Co-targeting အတွက်မဟာဗျူဟာများ" ။ ကင်ဆာကုသမှုသုံးသပ်ချက်များ။3(40): 3-445 ။
9929 Views စာ
“ အဆုတ်ကင်ဆာလူသတ်သမား” Gefitinib အပေါ်ပြည့်စုံသောနိဒါန်း
Sunitinib Malate အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - AASraw Reddit & Quora မှ NMN အကြောင်းမေးခွန်း ၁၂ ခု (အလွန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်)